FAQs - Dingzhou Meiao आयात र निर्यात व्यापार कं, लिमिटेड
प्रदर्शन शेल्फ र रैक
म कसरी अर्डर राख्न सक्छु?
तपाइँ हामीलाई तपाइँको अर्डर विवरण को बारे मा ईमेल द्वारा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, वा लाइन मा आदेश।
म कसरी तिर्न सक्छु?
तपाइँ हाम्रो PI पुष्टि पछि, हामी तपाइँलाई तिर्न अनुरोध गर्दछौं। टी/टी (एचएसबीसी बैंक) र पेपैल, वेस्टर्न यूनियन हामी प्रयोग गरीरहेका छौं सबैभन्दा सामान्य तरीका हो।
अर्डर प्रक्रिया के हो?
पहिले हामी अर्डर विवरण, ईमेल वा TM द्वारा उत्पादन विवरण छलफल। तब हामी तपाइँलाई तपाइँको पुष्टि को लागी एक PI जारी गर्दछौं। तपाइँ उत्पादन मा जानु भन्दा पहिले pr -epaid पूर्ण भुक्तानी वा जम्मा गर्न अनुरोध गरिनेछ। हामी निक्षेप प्राप्त पछि, हामी अर्डर प्रशोधन गर्न थाल्छौं। हामी सामान्यतया 7-15days को जरूरत छ यदि हामी स्टक मा आइटम छैन। उत्पादन समाप्त भएको छ भन्दा पहिले, हामी ढुवानी विवरण, र शेष भुक्तानी को लागी तपाइँलाई सम्पर्क गर्नेछौं। पछि भुक्तानी बसालिएको छ, हामी तपाइँको लागी ढुवानी तयार गर्न थाल्छौं।
*सानो swatch, नमूना समय को लागी नि: शुल्क5दिन भित्र
* मास उत्पादन नमूना: आवश्यकता अनुसार चार्ज।
सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई
Dingzhou Meiao आयात र निर्यात व्यापार कं, लिमिटेड
डम्बल फिटनेस ट्यूटोरियल
A: छाती 1. लेटाउने प्रेस: ​​मुख्य रूप pectoralis प्रमुख मांसपेशी र छाती नाली को मोटाई अभ्यास। कार्य: दुबै हात मा dumbbells संग तपाइँको बेन्च मा लेट, तपाइँको काँध मा dumbbells संग, हत्केलाहरु को सामना गरीरहेछ, धक्का t ...
यी4"अप्रभावी फिटनेस बाट बच्नुहोस् ...
सायद एक स्वस्थ जीवनशैली को लागी, वा मांसपेशि लाइन लाई कडा गर्न को लागी हो, धेरै मानिसहरु फिटनेस संग प्रेममा पर्छन्, नतिजा को रूप मा, केहि विद्यार्थीहरु प्रत्येक ठूलो कस्टम APP, ट्यूटोरियल किताबहरु एक गिरावट गर्न थाले, .. ।
सुरक्षा तपाइँको पहिलो विचार को एक सुरक्षा हुनेछ। के तपाइँ घर मा उपकरणहरु को लागी सुरक्षित छ? तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ? तपाइँका बच्चाहरु छन्? यदि तपाइँलाई स्वास्थ्य समस्या छ, तपाइँको डाक्टर संग जाँच र su बनाउन ...